Badar sugi lahaayeen
Midho sugi lahaayeen dhoobada
taarikada taageero Glassfibre
Change badhamada Quick
Spindles for sacadda Wheels
Vitrified shiidi Wheels
Shiidi dusha iyo Cylindrical shiidi
Qeebta Gear ku shiidi
Shiidi Form Gear
Cusbi-addoonsi shiidi Wheels & jar-off Wheels
giraangiraha shiidi toosan Bolt-up
Waskhda ah shiidi irbad
Niyad Center shiidi Wheels
Iska yaree-off Wheels
Xoojiyeen jar-off Wheels
Wheels Goo-off Large
giraangiraha goynta sax
Saxannada Velcro & Saxannada PSA
hadal haynta Maro
Change Saxannada Quick
Vulcanized Fiber Saxannada
Hadal haynta geed isbonji la Block
baahida loo qabo alaabta kala duwan oo la soo saaray ee mudada soo saarka kala duwan. guud ahaan, wax soo saarka mass, markii hogaanka waa 20-45 maalmood ka dib markii la helo oder ah. The jeer hogaanka u noqon wax ku ool ah marka (1) aannu ku helnay debaajigaaga, iyo (2) waxaan leenahay ogolaansho aad final ee wax soo saarka aad. Haddii jeer hogaanka our ma la xirmin suuqa shaqeeyaan, fadlan u gudbo shuruudaha aad la leedahay sale. In kiisaska oo dhan waxaan isku dayi doonaa in la tixgeliyo baahidaada. Xaaladaha intooda badan, innagu waxaynu nahay awoodaan in ay sidaas sameeyaan.
Haa, waxaan had iyo jeer isticmaalaan baakada dhoofinta tayo sare leh. Ugalay waxaa mar kasta loo isticmaalo inta badan oo ka mid ah wax soo saarka. Baakadaha Specialist iyo shuruudaha lagu cabayn aan caadiga ahayn la kulmeyso laga yaabaa in lacag dheeraad ah.
Cinwaankaaga: 18C Tianzhi dhismaha, NO.63 Beijing Rd, Qingdao Free Trade Zone, Qingdao, Shiinaha.
Su'aalaha ku saabsan wax soo saarka ama pricelist our, fadlan ka tago aad email noogu iyo waxaan noqon doonaa in la taabto ugu dhakhsaha badan.